Ulonyulo | Local Government Action
Home » Ulonyulo
Lusebenza njani unyulo
Uyulo loomasipala kufuneka lubanjwe kube kanye kwiminyaka emihlanu qho.
Zintathu iindidi zoomasipala. Zezi:
Oomasipala abambaxa nabengingqi
Oomasipala abaninzi bohlulwe ngokwendawo ezibizwa ngokuba ziiwadi. Kwaye, koomasipala abaninzi, kukho iindlela ezimbini zokonyulwa ube nguceba. Eyokuqala indlela kukonyulwa ube nguceba wewadi.
Uceba wewadi ligosa elonyulelwe ukumela indawo (okanye “iwadi”) ekhansileni. Uceba usenokumela umbutho wezopolitiko, usenokuba ngumgqatswa ozimeleyo okanye amele umbutho wasekuhlaleni ofana noMbutho waBarhafi (Ratepayers Association). Umgqatswa ofumene iivoti ezininzi kwiwadi nguye oba nguceba wewadi. Oku kubizwa ngokuba yinkqubo yokonyula “ngokutsiba kuqala ezintanjeni”. Ukuba uceba wewadi uyasishiya isikhundla nangaso nasiphi na isizathu, njengokubeka phantsi iintambo, kufuneka kwenziwe unyulo lovalo-zikhewu konyulwe uceba omtsha.
Ooceba bewadi basisiqingatha sabameli abonyulelwe ekhasileni. Esinye isiqingatha sonyulwe njengabameli bemibutho ngenkqubo ekutiwa kukumela ngolwalamano (PR), okusekelwe kulwalamano (ukwabiwa kwephesenti) yeevoti ezifunyenwe ngumbutho kunyulo. Babizwa ngokuba ngooceba bolwalamano.
Ngenxa yokuba ooceba bewadi bonyulwa ziiwadi zabo banika iimpendulo ngqo kwiindawo zabo kunooceba be-PR bona abanika iimpendulo kwimibutho yabo yezopolitiko ebabeke kuluhlu olo.
Oomasipala abanooceba beewadi basenokwenza iikomiti zeewadi. Ezi komiti kufuneka zibe sisixhobo zothatho-nxaxheba loluntu koomasipala.
Oomasipala bommandla abohlulwanga ngokweewadi. Ooceba bommandla, ama-60% abo bonyulwe ngoomasipla babo bengingqi aze ama-40% onyulwe ngqo ngabavoti ngokwe-PR.
Abavoti kwaba masipala bommandla bavota kathathu: ivoti enye yomgqatswa wewadi, ivoti enye yombutho ekhansileni, kunye nevoti enye yombutho kwikhansile yommandla.
Unyulo loomasipala lwahlukile kunyulo lwephondo nolwesizwe, unjengoko uyulo lwesizwe nolwephondo lusebenzisa inkqubo ye-PR kuphela apho abavoti bonyulela umbutho kuphela kungekona umgqatswa buqu.
Usenokonyula kuphela ukuba ubhalisile kumqulu wabavoti, ngoko qinisekisa ukuba ubhalisile! Usenokujonga ubone ukuba ingaba ubhalisiwe kusini na ngokuqhagamshelana neKomishoni yoNyulo eZimeleyo (i-IEC) okanye kwi-Ofisi yoNyulo kaMasipala. Uza kudinga inombolo yakho yesazisi.
Ukuze ubhalise kufuneka:
ubuncinane ube neminyaka eli-16 ubudala (ungabhalisela ukuvota xa una-16, kodwa kufuneka ube na-18 ukuze uvote)
bhalisa ngokowakho buqu
ube ngummi waseMzantsi Afrika (umhlali osisigxina akakuvota, nokuba banesazisi esiluhlaza na kanene)
unesazisi esiluhlaza esinebhakhowudi usiveze okanye isatifikethi sesazisi sethutyana.
Umhla wokuvala wokufaka isicelo sokubhalisela ukuvota lusuku olungaphambi kokubhengezwa – buza owona mhla kwi-IEC.
Ukuba awukwazi ukuya kufikelela kwisitishi sovoto ngenxa yokukhubazeka okanye ungaphandle kwelizwe, usenokufaka isicelo kwangaphambili, sovoto olukhethekileyo. Kufuneka ubhalise nje kube kanye ngaphandle kokuba uthuthile okanye imida yenkqila yakho yovoto itshintshile, apho ke kuza kufuneka uphinde wabhalisa kuloo ndawo. Kufuneka uvote kwiwadi kamasipala apho ububhalise khona.
Ukuphakanyiswa kwabagqatswa bewadi
Uthatho-nxaxheba lwakho kunyulo aluphelelanga nje ekuvoteni. Uluntu lwendawo yakho lusenokutyumba abagqatswa abakholelwa ukuba baza kubamela balwele iimfuno zoluntu olo. Nabani na ohlala kuloo masipala abhalisele ukuvota kuyo basenokuphakamisa igama lomgqatswa okanye bazigqatsele unyulo. Ukuba ukufanelekele ukuba ngumgqatswa kufuneka:
ube ngummi waseMzantsi Afrika oneSazisi esisemthethweni
ukwamkele ukuphakanyiswa uze ugcwalise iifomu eziyimfuneko kwi-IEC ngaphambi kokufika komhla wokuvalwa kokutyumba
ufumane abantu abangama-50 abatyikityele ukukuvotela ube kumasipala besebenzisa ifomu efumaneka kwi-IEC
uhlawule idiphozithi (ngokuxhomekeke kubungakanani bukamasipala wakho, njengoko kugqityiwe yi-IEC. Iyabuyiswa emva konyulo ukuba umgqatswa ufumene iivoti ezili-10% okanye ngaphezulu).
Abagqatswa abaqeshwe ngumasipala, ngurhulumente wephondo okanye owesizwe, okanye abameli abonyulelwe kwabanye kurhulumente wesizwe, owephondo okanye kumasipala, ukuba bonyuliwe, kufuneka babeke phantsi iintambo kwimisebenzi yabo ngaphambi kokuqalisa ngemisebenzi yokuba nguceba. Imibutho yezopolitiko kufuneka ibe ibhalisile kwi-IEC ukuze ifake abagqatswa be-PR. Umbutho ngamnye unemigaqo yawo yokuphakamisa abagqatswa kuluhlu lwe-PR Ukuba ulilungu lombutho wezopolitiko, le yenye yeendlela onokubandakanyeka ngayo ekukhetheni abagqatswa – ngokuya kwiindibano zokuphakamisa nokukhetha abagqatswa bombutho. Abagqatswa be-PR kufuneka bafikelela kwinkqubo luze uluhlu lombutho lubhaliswe kwi-IEC lufumaneke nakuluntu.
Ukumiselwa esikhundleni ngokweqela lezopolitiko
Nangona unyulo loomasipala lungenzelwanga kugxininisa kwiimfuno zoluntu, unyulo loomasipala eMzantsi Afrika ludla ngokugubungelwa ikakhulu ziipolitiki zesizwe...
Umthetho ochaphazelekayo 3